ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဘာဖတ်သနည်း Martech Zone
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကရှုပ်ထွေးတဲ့ algorithms များပါတဲ့တွက်ချက်မှုအမျိုးမျိုးကိုအလေးချိန်ရှိတဲ့အလေးချိန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အပြင်၊ Search Engines ကမည်သည့်သော့ချက်ကျသောအချက်များကိုအာရုံစိုက်သည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အများစုသည်သင့်ဆိုဒ်ကိုကြိုတင်စီစဉ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စာမျက်နှာကိုရေးခြင်းစသည့်အခါသင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်ကမ်းစာစောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၊ ဘလော့ဂ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် site မဆိုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၎င်းသည်ဤသည်။
Search Engine Optimization အတွက်သော့ချက် element များ
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်သော SEO ယောက်ျားများသည်ကျွန်ုပ်ကိုမခွဲမခွာမီ - ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းလင်းချက်ကိုလွှင့်ပစ်ပါမည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ SEO ကျွမ်းကျင်သူမှအာရုံစိုက်မည့်အရာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ meta tags ကဲ့သို့သောအခြားအချက်များလည်းရှိပါတယ်။ HTML နေရာချထားမှုနှင့်ဆိုဒ် ကျော်ကြားမှု။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့် website developer သို့မဟုတ်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်အားအလွယ်တကူပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်သော့ချက်အချို့ကိုသတိပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သင့်ရဲ့စာမျက်နှာ၏ခေါင်းစဉ် စာမျက်နှာအညွှန်းကိန်းဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း impact လိမ့်မယ်။ သင်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်တွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးချပြီးသင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဆိုက်၏ခေါင်းစဉ်ကိုဒုတိယနေရာတွင်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ domain name ကို သင့်ရဲ့နေရာချထားအပေါ်သက်ရောက်မှု။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများသို့မဟုတ်စကားစုများအတွက်ထိပ်တန်းနေရာရလိုပါကသင်၏ဒိုမိန်းအမည်တွင်ထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားပါ။
ပတ်ကျိ အရေးကြီးသောကြောင့်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုများကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ post slugs များသောအားဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါ အဓိကခေါင်းစဉ် သင်၏စာမျက်နှာ၏ (h1) သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များရည်ညွှန်းသောအကြောင်းအရာများအတွင်းတွင်အလွန်လေးလံသည်။ HTML တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားစွာထားခြင်းသည် indexing အားအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
အဓိကခေါင်းစဉ်နှင့်အမျှတစ် ခေါင်းစဉ်ငယ် (h2) သည် page ၏ indexing ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ သင့်ရဲ့ post ကို၏ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ငယ်များသည်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုများသည်မည်သည့်အညွှန်းကိန်းနှင့်မည်မျှကောင်းမွန်စွာသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
ထပ်ခါတလဲလဲ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်သော့ချက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ အကြောင်းအရာအတွင်းအရေးကြီးလှသည်။ ဤသော့ချက်စာလုံးများနှင့်သော့ချက်စကားစုများသည်၎င်းတို့သည်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ရှာဖွေနိုင်ဖွယ်သောသော့ချက်စကားစုများဟုတ်မဟုတ်ကိုဆန်းစစ်သင့်သည်။
complimentary သော့ချက်စာလုံးများ နှင့်အဓိကစာပိုဒ်တိုများလည်းကူညီလိမ့်မယ်။
အပိုဆောင်း ခေါင်းစဉ်ငယ်များ (h3) သည်စာမျက်နှာအတွင်းရှိအခြားစကားများထက် ပို၍ ကူညီနိုင်သည်။
တစ်ခုအတွင်းစာပိုဒ်တိုများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်း ကျောက်ဆူး tag ကို (link) သည် page တစ်ခုတွင်သော့ချက်စာလုံးနှင့် keyphrase indexing ကိုမောင်းရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအဖိုးတန်ကုန်စည်ကို“ click here” သို့မဟုတ်“ link” ပေါ်တွင်မဖြုန်းတီးပါနှင့်။ link နှင့်အဓိကစာပိုဒ်တိုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအမှန်တကယ်မောင်းနှင်ရန်ခေါင်းစဉ်နှင့်စာသားကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာတို့နှင့်ဆက်စပ်လိုပါကအသုံးပြုရန်သေချာပါသည် -
ကျောက်ဆူးလင့်နှင့်ချိတ်ဆက်သကဲ့သို့ခေါင်းစဉ် tag များကိုပုံလင့်ခ်များသို့ထည့်သွင်းခြင်းသည်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ရုပ်ပုံပါအကြောင်းအရာများကို (သေး) မဖော်ပြနိုင်သောကြောင့်သော့ချက်ကျသောခေါင်းစဉ်ထည့်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသာရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးပြုလျှင် Google's Image Search.
ပုံအမည်များ အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံတွင်ပါသောစကားများအကြားမျဉ်းကြောင်းများကိုမထားဘဲစကားလုံးများ သုံး၍ မထားပါ။ ထို့အပြင် image name သည်ပုံနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သော့ချက်စာလုံးများကိုသက်ဆိုင်မှုမရှိသောပုံသို့ထည့်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကူညီခြင်းထက် ပို၍ ထိခိုက်နိုင်သည်။
Tags: ကျောက်ဆူး tag ကိုtag ကိုစာသား anchorကျောက်ဆူးကိုစာသားdomain name ကိုh1 tag ကိုh2 tag ကိုh3 tag ကိုခေါင်းစဉ်image ကိုပုံအမည်အဓိကစာပိုဒ်တိုများသော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှုသော့ချက်စာလုံးတွေစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ပက်ကျိကို postpost ကိုခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်ငယ်များစာမျက်နှာ၏ခေါင်းစဉ်
CRM အတွက် R ကိုနားလည်ခြင်း
4:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 01
အကယ်၍ သင်သည်မှားယွင်းသောသော့ချက်စာလုံးများကိုစပြီးစတင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်၊ ဒါကအရေးမကြီးဘူး၊ သင်ကအဲဒါအများစုကိုရပြီလို့ငါထင်တယ်။
4:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 08
ခုန် ကျွန်တော်ရွေးချယ်သောသော့ချက်စာလုံးများသည် SEO အတွက်အမြင်ကျယ်သည်။
4:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 09
SEO ကိုသိကျွမ်းခြင်းနှင့်၎င်းကို layman ၏အသုံးအနှုန်းများဖြင့်ရှင်းပြခြင်းသည်ကွဲပြားသောတိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ငါကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်မည်သည့်အရာရှာဖွေသည်၊ ချိတ်ဆက်မှုသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းနှင့်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းရှင်းပြရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်သည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုအကြံဥာဏ်များကိုတိကျ။ နားလည်ရန်လွယ်ကူစွာဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဒီ post ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ် အလုပ်ကောင်း
4:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 09
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒန်! ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုညှိရန်ဆက်လက်ကြိုးစားသည်။ ငါကိုယ်တိုင်လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြောနေတာတွေကိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းအောင်ဘာသာပြန်နိုင်လို့ပဲ။